Home Aragti-doon Afar qaab oo lagu ogaado raali gelinta aan daacada ahayn
Waa dabiici in qofka bani’aadamka ahi uu khalad ka dhaco, waxaana ugu wanaagsan dadka garta in ay khaldameen kana noqda iyaga oo bixiya raali gelin ka timaada qalbiga, waxayna muujiyaan in ay ka xunyihiin.
Raalin gelinta waxay dabiibtaa dhaawaca xiriirka laba qof u dhexeeya, balse hadii ay noqoto mid aan ka imaanin qalbiga, waxaa meesha ku bur bura xiiriirka labada qof.
Halkan waxaan ku soo qaadanay qaabab kala duwan oo kuu sahlaya in aad garatid raali gelinta dhabbta ah iyo mida aan ahayn.
1 – Hadal badan oo la socda raali gelinta
Raali gelinta haddii ay ka timaado qalbiga oo ay daacad tahay uma baahna hadal badan in lagu dhex duugo. Sharraxaada badan waxay qarineysaa qofka dareenka uu ka qabo xaalada uu ka bixinayo raali gelinta.
Hadii aad la kulanto qof bixinaya raali gelin, hadana isku dayaya in uu sabab u sameeyo khaladka uu rali gelinta ka bixinayo ayaa ah in qofkaas uu wali aaminsanyahay ama isu haysto in uusan sameynin wax khalad ah.
Waxa keliya ah ee looga baahanyahay qofka ayaa ah in uu toos u abbaaro arinta uu ka bixinayo raali gelinta, muujiyo in uu khalad ka dhacay ama ka xun yahay qaabka ay waxa u dheceen ee isagu sababta u ahaa.
2 – Raali gelinta aan daacada ahayn waxaa ku jira hadal dadban
Hadalka dadban ayaa loo adeegsadaa in la iskaga fogeeyo qaadida mas’uuliyada wixii dhacay. Haddii raali gelinta ay ku jiraan ereyo sidan ah;
“Khalad ayaa dhacay” Qofka ku bilaaba hadalkiisa ayaa muujinaya in uu shaqsi ahaan mas’uul ka ahayn waxa dhacay, wuxuu aaminsan yahay in dadkale ay mas’uul ka yihiin dhibka dhacay.
“Dhibka lagugu sameeyay” Qofka sidan ku bilaaba ayaa sidoo kale iska fogeeynaya in uu ku lug lahaa dhibka soo gaaray qofka uu raali gelinta siinnayo.
Ogoow qofkaas waxaa uu qirsanyahay in dhib dhacay, wuxuuna si dadban iskaga fogeynayaa in uu mas’uul ka ahaa dhibka dhacay isaga oo isticmaalayo ereyo tilmaamaya in dadkale ay sababta leeyihiin. Sidaa darteed waxaad ogaataa raali gelinta noocaas ah in aysan run ka ahayn qofka bixinaya.
3 – Waxay igu yiraahdeen raali gelin bixi
Raali gelinta rasmiga ah kuma bilaabato “Waxay igu yiraahdeen raali gelin bixi” waxayna ka dhigantahay in raali gelinta aysan qofka kasoo go’in qalbigiisa. Raali gelinta sidaan ah waxay ku timid in qof kale uu u arko in ay muhiim tahay balse qofka bixinaya uusan u arkin in ay muhiim tahay.
Raalin gelinta noocan ah ayaa ku timid Khasab sababo kala duwan darteed qofka bixinayana ma aamin sano in dhibanaha uu u qalmo in la raali geliyo. Qofka adeegsada ereyadaas ayaa sidoo kale si cad kuugu sheegayo in uusan ku qanacsanayn raali gelinta balse uu dadkale dartooda u samaynayo.
Raalin gelinta daacada ah ayaa qiime u yeesha qofka dhibanaha ah, waxayna muujisaa in ay si dhab ah uga xuntahay dhibka dhacay ama loo geystay qofka dhibanaha ah.
4 – Ficil lama socdo raali gelinta aan daacada ahayn
Raali gelinta rasmiga ah ayaa waxaa ay wadataa ficil lagu saxayo wixii khalad ah oo dhacay. Ficilkaas ayaa muujiyaa in raali gelinta la bixiyay ay ahayd mid daacadnimo ah.
Waxaa kale oo muhiim ah, in dhibka raali gelinta laga bixyay uusan mar dambe soo noqonin. Taas ayaana xaqiijineysa in raali gelintaas ay daacad ahayd.
Balse haddii aad aragtid qof bixiyay raali gelin, hadana aan wax ficil raacinin sida ballan qaad ah in dib dambe dhibkaas uusan sabab u noqonaynin in uu soo laabto, waxaad ogaataa in raali gelintaas aysan daacad ahayn, taas oo muujineysa in qofkaasi ay markale ka suurtowdo in uu ku dhaqaaqo khaladkii oo kale ama mid la mid ah.
Previous articleU gaar ah dadka khuuriya: Talooyinkan qaado si aad u joojisid
Next articleMagacyada boqorada maxaysan ugu jirin liiska dadka ugu taajirsan dunida?